I-Peugeot ikhuza ibuya ngencanyana
MCEBO MPUNGOSE | October 22, 2019
IGADLA ngezimoto ezintsha inkampani yaseFrance iPeugeot. Kuzokhumbuleka ukuthi inkampani ebikhiqiza lezi zimoto kuleli, iPeugeot Citroen South Africa, yafulathela elakuleli ngo-2017 kulandela ukuthwala kanzima emakethe yezimoto kuleli.
Njengoba isikhuze ibuya ngokugcwele ifuna ukuqala ikhasi elisha ngomncanyane we-hatchback, i-108, neSUV i-5008.
Le nkampani ikhombise ubuchule ngokwethula lezi zinhlobo zezimoto ngoba zithinta ngqo izimakethe ezinabathengi, okungabantu abafuna imoto yomndeni, ngokunjalo nabantu abathungatha izimoto zokuqala ezishibhile.
Lokhu kukubeka kucace ukuthi abakwaPeugeot abazile ukuzosinisa amahleza kodwa bazoncintisana nezinye izinkampani.
Injabulo ibibhalwe emehlweni kumqondisi wakwaPeugeot Citroen South Africa (PSA), uXavier Gobille, ngesikhathi kwethulwa lezi zimoto ngeyanga edlule eHartbeespoort, eveza ukuthi abakhuzi nje ibuya kodwa babuyele ukuzoncintisana nabanye abakhiqizi bezimoto.
“Asizile ukuzokwethula imoto entsha yePeugeot nje kuphela kodwa sizokwethula kabusha izimoto zePSA eNingizimu Afrika,” kusho uGobille.
“Phambilini besisemsileni emjahweni wezimoto kodwa manje sesikulungisile obekungahambi kahle. Sesikulungele ukubangisana nezimoto eziphambili,” usho kanje.
Ukwenza lokhu, ngaphandle nje kwezinhlobo ezintsha zezimoto, uGobille uthe balaxaze amagaraji abengadayisi kahle, baguqula indlela abaxhumana ngayo namakhasimende, kanti sebeyithuthukisile nendlela abakhangisa ngayo izimoto zabo.
AbakwaPeugeot bethule i5008 ne-108 okuyizimoto eziqukethe ama-warranty ne-rsevice plan yeminyaka emihlanu noma u-100 000 km.
I-5008 isaphethe izihlalo eziyisikhombisa noma ingaseyona iMVP njengaphambilini.
Inezihlalo zabathathu phakathi nendawo (ngemuva komshayeli) ezigoqekayo, bese iba nezimbili emuva ezigoqekayo futhi okwaziyo nokuzikhipha.
I-dashboard ye-5008 iyafana neyomfowabo omncane i-3008, iqukethe i-touch screen ka-20cm, ene-Apple CarPlay ne-Android Auto, namabhathini ayisikhombisa ngaphansi kwayo okwazi ukulungisa ngawo izinto ezifana ne-ventilation, satnav, nokunye.
Ngaphezu kwalokho, ngobuchwepheshe bale moto ukwazi ukukhetha umbala we-screen, umbala imoto ekhanya ngawo ngaphakathi nohlobo lomculo oluhambisana nendlela ozizwa ngayo ngaleso sikhathi.
Izihlalo zangaphambili zinezinhlobo ezinhlanu zama-massage.
Okungenza abanye abashayeli baxwaye, ubuncane besiteringi kule moto, kwazise iyi-SUV, ngakho ikwenza ulindele isiteringi esikhudlwana kunalesi abasifakile.
Nokho uma usuyishayela, ayikho into engihlabe umxhwele njengendlela evuma ngayo ukulawulwa umshayeli.
Ngaphezu kwalokho, ingithusile indlela eshibilika ngayo emgwaqweni nangendlela ebambelela ngayo phansi ngisho ujika ikhona ngesivinini.
Ayingichazanga kangako emgwaqweni oyibhuqu noma ukwazi ukuciphiza ibhathini uyazise ukuthi usungena obhuqwini, anguwuzwanga umehluko omkhulu, kodwa ke vele ubani ofuna ukufaka iPeugeot obhuqwini?
Ngaphakathi ukuvuleka kwayo kungichazile kodwa izihlalo ezisekugcineni kufana nokuthi ezezingane noma ezokugibeza abantu uma nihamba ibanga elifishane ngenxa yesikhala esincane esikhona.
Abakuleli bazokhetha kwizinjini ezimbili okuyi 1.6 litre turbopetrol ekhiqiza amandla awu-121kW no-240Nm ne2.0 litre turbodiesel ekhiqiza * -110kW no-370Nm. Zombili lezi zinhlobo zidonsa ngamasondo angaphambili, ngo-gearbox ozishintshayo ogcina kwigiya lesithupha.
Abathengi bazokhetha phakathi kwe-Allure ne-GT Line (equkethe amasondo awu-19 inch).
Zombili lezi zinhlobo ziqukethe ubuchwepheshe bedual-zone automatic climate control, auto headlights nama-wipers, cruise control, park assist yangaphambili nangemuva, Lane Departure warning, Road Sign Recognition kanye ne-Active Blind Spot Detection.
Izihlalo ze-Allure ziphuma ziyisikhumba nendwangu, kanti iGT Line yona iqukethe isikhumba ezihlalweni zayo zonke.
IGT line iphinde iphume ne-180 degree vision camera, wireless charging, i-sound system eseqopheleni eluphezulu, voice recognition ne-emergency braking.
Ngokwami abakwaPeugeot balethe imoto eyisidingo kuleli nokho ibukeka ingase ithwale kanzima njengoba zithe chithi saka izimoto zalolu hlobo abantu abangakhetha kuzo.
Kuzo kungabalwa iSuzuki Ertiga, Nissan X-Trail, Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe nezinye.
Noma ikuqukethe konke okungafunwa umshayeli, ibukeka izoheha kakhulu abathengi abathungatha okuhlukile kunokushayelwa nguwonke wonke, noma abathengi abazifelayo ngamaPeugeot.
Noma kuyithathe iminyaka emibili kuphela ukuthi ishaye ibuye kuleli le nkampani, kunento kimi elokhe isho njalo ukuthi basindwe zinyawo abakwaPeugeot ukuthula i-5008 entsha kodwa isangamangaza abaningi.
1.6 THP Allure: R534 900
1.6 THP GT-Line: R579 900
2.0 HDi Allure: R554 900
2.0 HDi GT-Line: R599 900
I-108 iyilokhu ekudingayo iPeugeot